Mitombo haingana ny indostrian'ny fananganana
Ny fitaovam-panamboarana amin'ny ankapobeny dia manondro ireo fitaovana tsy misy metaly tsy misy metaly miaraka amin'ny refractoriness mihoatra ny 1580 ℃ ary mahatanty ny fiovan'ny vatana sy ny simika ary ny fiantraikany mekanika. Fakafakao ny sata fampandrosoana momba ny indostria refractory. Ny fitaovana fanamboarana fitaovana dia zava-dehibe fototra ...
Tamin'ny taona 2019, ny indostrian'ny refractory dia hampiroborobo ny fanavaozana rafi-pamatsiana ho an'ny lafiny famatsiana
Tamin'ny taona 2019, ny indostrian'ny refractory dia hampiroborobo ny fanavaozana rafi-pamatsiana ho an'ny lafiny famatsiana. Miorina amin'ny ankapobeny ny fampandehanana ny indostria, nitombo kely ny vokatra, ary nihatsara tokoa ny haavon'ny fampandrosoana maitso. 1. Ny famoahana dia maharitra ary miakatra. Tamin'ny taona 2019, ny vokatra ...
Ny fitaterana ny vokatra elektrôzika any Shina dia 46.000 taonina tamin'ny Janoary-Febroary 2020
Raha ny antontan-kevitra momba ny fadin-tseranana, ny sandan'ny fanondranana grika 46000 tany Shina tamin'ny Janoary-Febroary 2020, fitomboan'ny taona 9.79%, ary ny sandan'ny fanondranana dia 159 799,900 dolara amerikana, fihenan'ny taona-taonany 181.480500 Dolara amerikana. Hatramin'ny taona 2019, ny vidin'ny ankapobeny any Sina ...
Carode elektrodika no vokarin'ny orinasa lehibe indrindra
Carode elektrodika no vokarin'ny orinasa lehibe indrindra. Ankoatr'izay, ny orinasantsika dia mamokatra sy manome karazana karazany sy mombamomba manokana ny elektronika grika sy mpamatsy elektronika tady elektronika, mba hanomezana ny filàn'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Na izany aza, ho an'ny mpampiasa maro, tsy azon'izy ireo fotsiny ny fampiasana ...